Fanarahamaso ao Libanona: Olan’ny fiainana manokana · Global Voices teny Malagasy
Adisanina ny endrika araka ny lalàna ananan'ny fandrindrana ny fanarahamaso
MpanoratraSyeda Iqraa Bukhari
Voadika ny 29 Desambra 2021 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, Español, Français, English
Graffiti maneho sarina kamerà iray fanarahamaso. Navoaka sy nomena anarana ho azo averina ampiasaina ao amin'ny Pixabay.
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny UPROAR, hetsika Media Madinika izay miantso ireo governemanta hiatrika ny fanambin'ny zo nomerika nandritra ny Universal Periodic Review (UPR).
Raha toa ny Lohataona Arabo ka nanasongadina toejavatra iray momba ny fipongaran'ny nomerika, ny fikatrohana nomerika ary ny fanapariahana, dia ity: nifoteran'ny singa izay niasa ho mpanentana azy tany am-piandohana ihany ilay onjam-pitroarana nanozongozona ny tao Afovoany-Atsinanana, nanomboka tamin'ny 2011—ny teknôlôjia.
Iray amin'ireo toerana nitrangan'io i Libanona, izay amin'izao fotoana izao ny olompireneny dia miatrika ambana teknôlôjika henjana ho an'ny fahalalahan-dry zareo, no sady toerana isian'ny fikitikitihana fiainana manokana na aiza na aiza, ary mazàna atao tsy misy fanarahamaso mifanaraka amin'ny rafitra araka ny lalàna.
Nihamafy ny fifampihenjanana teo amin'ny vahoaka sy ny governemanta nandritra ireo hetsipanoherana Revôlisiônan'ny Oktôbra — izay nanomboka ny 2019 ary nitohy hatramin'ny Sept 2020, fotoana nanoratana ny lahatsoratra—rehefa navandravadran‘ireo mpanao hetsipanoherana notànana am-ponja ny olana momba ny sampan-draharaham-piarovana izay nandraoka ny findain'ireo mpanao hetsipanoherana sy nitaky ny tenimiafina hahafahana mamaha azy ireny. Na toy ny mafanipaka amin'ny fitsitsiana aza no nijeren'ny sasany ireo hetsika fanoherana, ny fidadasiky ny teboka anaty fangatahan'ireo mpanao hetsipanoherana dia mirona mankany amina tanjona revôlisiônera mifantoka amin'ny famaritana rafitra pôlitika libaney isan-tsehatra, izay kikisan'ny kiantranoantrano, ny fiandaniana, ny famahanan-dalitra, ary ny tsy fahaizana mitantana, ankoatry ny olana hafa. Niaraka tamin'ny fanaovana tsindry ho an'ny zon'ny vehivavy, toekarena marin-toerana, ny famoronana asa ary ny tolotra ho an'ny vahoaka, dia nahakasika ihany koa ny fahalalahana an-tambajotra ireo fitakiana, toy ny : “Te-hibitsika aho nefa tsy hosamborina”.
Ireo sampan-draharaham-piarovana ao Libanona dia fantatra ihany koa amin'ny fampiasan-dry zareo rindrambaiko fitsikilovana fiainana manokana. Tamin'ny 2018, ny Lookout sy ny Electronic Frontier Foundation (EFF) dia namoaka tatitra iray namborahany ny fiasian'ireo “angondrakitra manana hadiry Giga an-jatony nosintonina ” izay fanitsakitsahana ny tena zo fototra amin'ny fiainana manokan'ireo olompirenena Libaney. Angamba ny tena manafintohina amin'izay nolazain'ilay tatitra dia ny fanamafisana milaza hoe ny kroazada erantany amin'ny fitsikilovana ny aterineto, antsoina hoe “Dark Caracal” izay nikendrena firenena 21 hatramin'ny 2012, ambana mitohy sy avo lenta – advanced persistent threat-level (APT), fanentanana naparitaka nanerana izao tontolo izao, dia toa hoe nalefa “niainga avy ao amin'ny tranoben'ny Fiarovana Ankapobeny Libaney ao Beirut. Ny vondrona APT dia fikambanana izay mitari-dàlana amin'ireo “fanafihana ny torohain'ny firenena amin'ny resaka fiarovam-pirenena na ho amin'ny tanjona tetikady ara-toekarena, ampiasàna ny fitsikilovana an-tambajotra na fisomparana an-tambajotra”, no sady idirany ihany koa hatramin'ireo fandraharahana goavana. Amin'ny ankapobeny ry zareo dia mampiasa fomba maro mba hisintonana rakitra na torohay momba ireo heloka bevava nataon'olona ambony, toy ny fitakiana vidin'aina na fandrobàna amin'ny alàlan'ny aterineto.
Raha jerena ny endrika maha-mpanjifa sy maha-proxy azy, ilay rindrambaiko fitsikilovana, izay namely firenena mihoatra ny 20 sy ireo mpandrisika hafa (ivelan'ny fanjakàna) dia notondroina ho “fanarahamason'ny governemanta amin'ny maha-tolotra andoavambola azy.” Nolazaina fa ny Dark Caracal, amin'ny fampiasàna rindrambaiko tsotra fijirihana sy fomba tranainy fanaovana ‘phishing’, dia afaka miditra manjakazaka tanteraka any anatin'ireo fifanakalozana nafenina anaty tambajotra sôsialy, isan'ireny ny Whatsapp.
Ny sasany manamafy fa misoroka ny heloka bevava ny fampiasana teknôlôlia fanarahamaso, sady manampy hitandroana ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna, tafiditra amin'izany ireo sehatra toy ny fanabeazana. Saingy ireo sasany mpikatroka mpiaro zon'olombelona milaza fa ny rindrambaiko fanarahamaso dia nampiasaina nikendrena olona an'arivony, isan'ireny ireo mpikatroka sy mpanao gazety.
Nisy fanambarànanavoakan'i Abbas Ibrahim, tale jeneralin'ny Fiarovana Ankapobeny ao Libanona (GDGS), izay fantatra ho toy ny “maso sy sofin'ny fanjakana Libaney” nandàvany ilay tatitry ny EFF. Nolazain'i Ibrahim fa “tsy ananan'ny Fiarovana Ankapobeny ny karazana fahaizamanao tahaka ireny. Antenaintsika ny mba hananana azy ireny.”
Ireo vondrona mpiaro zon'olombelona dia efa nandrakitra an-tsoratra ihany koa tany aloha ny fampiasàn'ilay fitantanan-draharaha ny rindrambaiko fitsikilovana FinFisher. Ananan'ny FinFisher ny fahafahana mihaino ireo karazana fampiasa an-tambajotra sôsialy isankarazany — toy ny Whatsapp, Viber sy Skype— ary afaka miditra anatin'ireo torohay momba ny fiainana manokana, toy ny toerana onenana, ny tenimiafina, ny rakitry ny antso natao, ny hafatra, ny failo, saripika, lahatsary ary fandaharampotoana, sns….
Ahoana hoy ny lalàna libaney?
Ny endrika araka ny lalàna ananan'ny fandrindràna ilay fanarahamaso fotsiny dia efa adisanina ary adika amin'ny fomba maro samihafa. Ny Telecommunication Interception Act (fanapaingorana fifandraisandavitra) tamin'ny 27 Desambra 1999, fantatry ny rehetra bebe kokoa amin'ny hoe Lalàna 140/1999, no miaro ny fiainana manokanan'ireo olompirenena Libaney, raha tsy amin'ny fotoanan'ny hamehana, toy ny fisiana heloka bevava. Ny Andinina faha 14 ao amin'ny Lalam-panorenana Libaney dia milaza fa “ Tsy azo idirana an-kery ny toeram-ponenan'ny olompirenena. Tsy misy na iza na iza afaka miditra ao afa-tsy noho ny toejavatra manokana sy amin'ny fomba voafaritry ny lalàna ihany.”
Na izany aza anefa, tsy tokony ho raisina ho zo efa azo sahady ny hoe “ny toeram-ponenan'ny olom-pirenena iray” dia zavatra misaraka amin'ny fiainany manokana sy ny fisiana tsy hita mason'ny olompirenena iray any anatin'ireo fitaovany elektrônika. Tsy mbola mifamatotra ireo sehatra roa ireo—na hoe avahana tsirairay—eo imason'ny lalàna libaney. Ho an'ny olona maro izay mahita ny tenany mifamatotra be amin'ny findainy, ao anaty firenena iray izay ny ankamaroan'ny vahoakany dia mampiasa aterineto, raha ny marina dia toy ny tranony iray koa ny sehatra nomerika. Tokony hitarina mankany amin'ireo fitaovana elektronika sy fifandraisana anaty tambajotra ny fiarovana ny fiainana manokana eo anatrehan'ny lalàna, fa tsy ny “toeram-ponenan'ny tsirairay” ihany.
Araka ilay Andininy faha- 14, ny “hitsivolana araka ny lalàna na ara-pitantanana” dia tokony havoaka mba hanomezana alàlana ny fanarahamaso ireo fifandraisana. Tsy mahomby io didy io mba ho fitaovana hitazonana ireo masoivoho mpanangom-baovao ho tomponandraikitra, satria izy ireny dia eo ambany fiahiana mivantan'ny minisiteran'ny atitany, izay manana ihany koa ny fahafahana manome alàlana ny fipaingorana / fihainoana fifandraisana.
Lazain'ny Andininy faha-9 amin'ilay Lalànan'ny Fanapaingorana fa ny fankatoavana ara-pitantanana dia azon'ny Ministeran'ny Fiarovana na ny Ministeran'ny Atitany omena, rehefa nohamafisin'ny Praiminisitra ilay lalàna sy ilay endrika fanapaingorana. Ity karazana fanazndihadiana ity, izay tgsy mahazo mihoatra ny roa volana, dia amina toejavatra manokana ihany no azo omena alàlana, toy ny hoe ho fiadiana amin'ny asa fampihorohoroana, heloka bevava nomanina na loza mitataoho an'ny filaminan'ny fanjakana. Ny tsy fahatomombànany anefa dia ny hoe ny tsirairay amin'ireo heloka bevava dia azo ampifandraisina mora foana amin'ireo mpikatroka na mpanohitra.
Mandritra izany fotoana izany, afaka manandrana miaro ny fiainany manokana ety anaty aterineto ireo mpikatroka sy ny olompirenena tsotra, amin'ny alàlan'ny fitrohana ireo rindrambaiko fiarovana nomerika toy ny Detekt ary amin'ny fanaovana tatitra ny tsy fetezan-javatra mankany amin'ireo manampahefana. Kanefa mazava ho azy, tsy misy ilàna azy io fiampangàna io raha toa ireo manampahefana toriana ka voarohirohy ihany koa ao anatin'ilay fanarahamaso ivelan'ny lalàna sy ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana.
Ara-tantara i Libanona dia nahatahiry ny lazany amin'ny maha-firenena isian'ny fahalalahana kokoa azy raha mitaha amin'ireo firenena Arabo hafa. Raha tarafina anatin'ireo andiana ezaka ataon'ireo masoivohon'ny governemanta mitolona ho amin'ny (na mandà) fiainana nomerika manokana, dia olana iray ny fitsabatsabahana amin'ny zon'olombelona ety anaty tambajotra.
Mba hiantohana hatrany ifotony ny zo nomerika, mila asiana fanovàna ireo lalàna tranainy na mamorona lalàna vaovao mba hamerana ny fitsabahana amin'ny fiainana manokan'ny olompirenena sy hanomezana alàlana ny fanarahamaso mahaleotena ary mafy orina an'ireny fomba fanao amin'ny fanarahamaso ireny. Amin'izany ihany no ahafahana miantoka ny fiainana manokan’ny olompirenena, ny fahalalahany ary ny fiarovana nomerika tsy misy tomika.